ချီလီနိုင်ငံက ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးနှံပြီးသည့် နိုင်ငံသားများ၊ နိုင်ငံခြားသား နေထိုင်သူများအား နယ်စပ်ဖွင့်ပေးမည် - Xinhua News Agency
ချီလီနိုင်ငံ၊ ဆန်တီယာဂိုမြို့၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးသောနေရာ၌ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် ပြင်ဆင်နေသည့် သူနာပြုတစ်ဦးအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဆန်တီယာဂို၊ ဇူလိုင် ၂၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ချီလီနိုင်ငံက နိုဗယ်ကိုရိုနာရောဂါ (COVID-19) ကာကွယ်ဆေး အပြည့်အဝထိုးနှံထားသည့် နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံခြားသား နေထိုင်သူများအား နိုင်ငံရပ်ခြားမှ ပြန်လာလိုပါက ဇူလိုင် ၂၆ ရက် တနင်္လာနေ့မှစ၍ နယ်စပ်များအား ဖွင့်လှစ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လက်ထောက်အတွင်းရေးမှူး Paula Daza က ဇူလိုင် ၂၂ ရက်တွင်ပြောသည်။
အစိုးရအနေဖြင့် ချီလီနိုင်ငံ၏ “နယ်စပ်ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်’’ မူဘောင်အတွင်း နိုင်ငံရပ်ခြားမှ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမည့်သူများအား ကြီးကြပ်ရန် “နယ်စပ်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ခရီးသည်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေး အမျိုးသားဌာန’’ ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်း Daza က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါဌာနအနေဖြင့် ချီလီနိုင်ငံ၏ နယ်စပ်များတွင် ရောဂါကူးစက်မှုအသစ်များ ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ရောဂါစမ်းသပ်ခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်းများအတွက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံပြင်ပသို့ ခရီးသွားခြင်းအတွက် ချီလီနိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံခြားသား နေထိုင်သူများအနေဖြင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးအပြည့်အဝထိုးနှံပြီးကြောင်း အတည်ပြုထားသည့် ကာကွယ်ဆေးပတ်စ်ပို့နှင့် အလားသဏ္ဍာန်တူသော “ရွေ့လျားဖြတ်သန်းခွင့်’’ လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့အပြင် ချီလီနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်လာသူမည်သူမဆို ၁၄ ရက်တာအတွက် ရောဂါလက္ခဏာအစီရင်ခံစာအား မဖြစ်မနေ ဖြည့်သွင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ချီလီနိုင်ငံ၌ COVID-19 ရောဂါအသစ်ဖြစ်ပွားမှု လျော့ကျမှုရှိကြောင်း အထောက်အထားများက ပြသထားသော်လည်း ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်က အားလျော့သွားပြီလို့တော့ ယူဆလို့မရပါဘူး။ ပြီးတော့ သန့်ရှင်းရေး ဆောင်ရွက်ချက်တွေအားလုံးကို ထိန်းသိမ်းသွားရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး Enrique Paris က ပြောကြားခဲ့သည်။
ချီလီနိုင်ငံတွင် ပြီးခဲ့သည့် ၂၄ နာရီအတွင်း COVID-19 အတည်ပြုလူနာသစ် ၁,၈၆၁ ဦးနှင့် ထပ်မံသေဆုံးသူ ၁၈၁ ဦး ရှိခဲ့ရာ ရောဂါကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း ၁,၆၀၄,၇၁၃ ဦး အထိ မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်းနှင့် ကပ်ရောဂါဖြင့် စုစုပေါင်း သေဆုံးသူဦးရေ ၃၄,၇၉၂ ရှိကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Chile to open borders to fully-vaccinated nationals, foreign residents
SANTIAGO, July 22 (Xinhua) –
Chile will open its borders starting Monday, July 26, to nationals and foreign residents returning from abroad who have been fully vaccinated against the novel coronavirus disease (COVID-19), Undersecretary of Public Health Paula Daza said Thursday.
The government has createda“National Unit for Border Control and Passenger Surveillance” to oversee their return within the framework of Chile’s “Protected Borders Plan,” Daza said atapress conference.
The unit will coordinate the institutions that control, test and supervise new cases of the disease at Chile’s borders.
For outbound travel, Chileans and foreign residents also requireaso-called “Mobility Pass,” similar toavaccine passport that certifies the bearer has been fully vaccinated.
Health Minister Enrique Paris said evidence points toadecline in new cases of COVID-19 in Chile, but warned “we do not consider the virus to be defeated and all sanitary measures should be maintained.”
In the past 24 hours, Chile registered 1,861 new cases of infection and 181 more deaths from COVID-19, raising the total caseload to 1,604,713 and the pandemic death toll to 34,792. Enditem
A nurse preparesadose of COVID-19 vaccine atavaccination site in Santiago, Chile, March 25, 2021.(Photo by Jorge Villegas/Xinhua)